Ny hisavorovoroan-kilantoana | NewsMada
Nohafahan’ny fitsarana madiodio noho ny fisalasalana, omaly, ireo olona enina voasambotra tetsy amin’ny kianjan’ny 13 mey, voarohirohy ho nanao fanakorontanana, nandritra ireny hetsiky ny K25 ireny. Ny iray fahafito aza, sazy mihantona herintaona an-tranomaizina ny didy navoaka momba azy. Iray andro monja taorian’ny antso fangatahana fitoniana nataon’ny filoha teo aloha sady mpifaninana tamin’iny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa farany teo iny izany no mitranga. Tao anatin’ny kabary fiarahabana sy firarian-tsoa ny filoha vaovao voafidy ara-dalàna moa, raha tsiahivina, ny nanaovany izany antso izany.
Nivaly ny antso, ary azo lazaina tsy amim-pihambahambana fa tsy very tsy akory fa mbola ao ihany ny lanja sy ny maha zava-dehibe ilay soatoavina mampiavaka antsika Malagasy amin’ny firenena maro manerana izao tontolo izao: ny Fihavanana izany. Voamarina eto, ary manamafy izao toe-javatra izao, ny fahendren’ny Ntaolo : “ny hisavorovoroan-kilantoana”. Amin’ny lafiny kolontsaina malagasy izay fa amin’ny lafiny politika, taratry ny fahazoan’ny demokrasia aina indray eto amin’ny firenentsika. Mila kolokoloina fatratra, ary tokony hotandrovina toy ny anakandriamaso izay. Raha tsy izany… Aoka fotsiny! Jereo ny zava-mitranga atsy amin’ireo firenena afrikanina rahavavintsika amin’izao fotoana izao: ady an-trano tsy misy farany, fifandirana sy fifanenjehana mandavantaona… Mbola hisy mpanao politika hifikitra amin’izany fomba ratsy tena mamohehitra manapotika ny firenena izany ihany ? Ndeha hosanatriavina ny fitenenana.
Efa nambara ombieny ombieny fa kihon-dalana lehibe eo amin’ny tantaran’ny firenentsika iny fifidianana filoham-pirenena farany teo iny. Kihon-dalana hidirana amin’ny tena fampandrosoana marina sy ny fiheverana izay tena hampandry fehizay ny firenena malagasy. Mba hiavaka sy ho modely marina, farafaharatsiny aty Afrika, i Madagasikara. Eny, nahoana moa ? Manerana izao tontolo izao mihitsy koa. Ohatra ny “azo raisina, sady mitombina” izany. Sa inona indray koa…?